Filtrer les éléments par date : mercredi, 14 juillet 2021
mercredi, 14 juillet 2021 19:06
Iangoty : Vitantsika io hoy izy
Ity ny hafatra voaray avy amin'ny Rainy :
Notsongaiko manokana ianao ary isaorako feno fa nitondra hafaliana sy fahasoavana ny zanako.
Classe de 8è ilay zanako tamin'ity taom-pianarana ity saingy rehefa nisy ny confinement dia tsy nanaiky hijanona ato an-trano izy fa hianatra, dia niresaka tamin'ny Talen-tsekoly nianarany aho dia nampiakarina 7è izy.
mercredi, 14 juillet 2021 18:14
Top 10 des trucs à savoir sur la situation à Madagascar, selon Topito.com
En introduction, le site précise en ces termes : "Si chez Topito on aime bien vous faire rire tout en vous livrant des informations utiles ou insolites, on déborde parfois un peu sur des sujets plus sérieux, comme le réchauffement climatique, sans pour autant considérer notre travail comme du journalisme mais parce que ces sujets nous tiennent à cœur.
C’est pour ça qu’aujourd’hui on souhaite vous parler de la situation actuelle de Madagascar qui est tout bonnement catastrophique. Pour bien comprendre ce qui se passe là-bas et pourquoi c’est alarmant on va essayer de voir ensemble les points clés de cette affaire, en tentant de vulgariser un peu tout ça."
Dans une publication du 12 juillet, l’auteur cite ses sources à la fin de l’énumération : RFI, France Info, France Info 2, France Info 3, L’Express, Le Monde, L’Obs, MSN Actualités, TV5 Monde. Autant de supports médiatiques français.
Voici le Top 10 des choses à savoir sur la situation à Madagascar selon lui :
Andry Rajoelina : Hiazo an’i Abidjan hikaroka famatsiam-bola
Ho tanterahina ao Abidjan - Côte d'Ivoire, ny alakamisy 15 jolay ny fihaonambe faha-20 ahitana ireo Filoham-pirenena sy Mpitondra fanjakana afrikanina eo anivon'ny Fikambanana Iraisam-pirenena ho an'ny Fampandrosoana (IDA 20).
Handray anjara amin’ny fihaonana i Madagasikara, hitarika ny delegasiona malagasy any an-toerana ny Filoham-pirenena Andry Rajoelina. Hanainga eto an-tanindrazana ny tenany anio alarobia 14 jolay 2021.
Ny IDA dia rantsamangaikan'ny vondron'ny Banky Iraisam-pirenena, izay efa mpiara-dia amin’ny firenena Malagasy ho an’ny fampandrosoana an’i Madagasikara, indrindra eo amin'ny sehatry ny fahasalamana, ny fanabeazana, ny fiahiana ara-tsosialy ary ihany koa teo amin’ny sehatry ny fizahan-tany, ny agrobusiness ary ny toekarena miankina amin’ny haitao ara-kajy mirindra.
mercredi, 14 juillet 2021 12:10
Antsirabe : Nizara lamba firakotra ho an'ireo mpatory an-dalana ny Tahirim-bolam-panjakana
Nanantotosa hetsika ara-tsosialy ny mpiasa eo anivon'ny Tahirim-bolam-panjakana Atsirabe. Efa fanaony isan-taona toy izao, fa tamin’ity indray maka ity dia lamba firakotra no notsinjaraina ho an'ireo olona tsy manan-kialofana sy mpatory an-tsena amin’ny toerana samihafa ao an-drenivohitr’i Vakinankaratra, izay nosantarina tao Antsenakely.
Raha ny fanazavan-dRemamy Fenofitiavana, filohan'ny Sosialin'ny Tahirim-bolam-panjakana ao Antsirabe dia hetsika iraisan'izy ireo eo anivo'ny Tahirim-bolam-panjakana manerana ny Nosy ny tahaka izao, saingy samy manana ny endrika anaovany izany ny isam-paritra.
Ho an'Antsirabe manokana dia in-droa isan-taona no hanaovan'izy ireo ny hetsika tahaka izao, ary ezaky ny mpiasa no hamatsiana izany fa tsy volam-pajakana akory.
Tsy nampiomanina nialoha na nofantenana moa ireo olona nisitraka izany, saingy efa notiliana nialoha kosa ireo toerana misy ireo mpatory an-tsena sy an-dalam-be nialoha ny fizarana izany, ary ireo mpiasa lehilahy notarihin-dRtoa Lehiben'ny Tahirim-bolam-panjakana no nizara izany eran'Antsirabe ny alin'ny alatsinainy lasa teo.
Amin'ny volana desambra ny hetsika ara-tsosialy manaraka ataon'ireto mpiasa eo anivon'ny Tahirimbolam-pirenena Antsirabe ireto.
mercredi, 14 juillet 2021 11:17
Makis an'i Madagasikara : Nody niaraka amin’ny amboara
Tafaverina an-tanindrazana ny talata 13 jolay ireo Makis an'i Madagasikara rehefa nandrato fifaninanana telo eo amin’ny taranja rugby.
Fandresena 4 no azon'ireo ekipam-pirenena tamin’ireo lalao 6 natao.
Tompondaka lefitra nandritra ny "Afrika Trophée Barthez" ny U20 lehilahy. Laharana faha 3 tao amin'ny Vondrona A nandritra ny fiadina ny ho tompondaka an'i Afrika (RAC 2021) ny Sénior lehilahy.
Nibata ny amboara nandritra ny "Rugby Africa Women's Cup" ny Sénior vehivavy, ary nametraka azy ireo eo amin'ny laharana faha 27 manerantany.
Nitsena azy ireo teny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato ny Tale Jeneraly misahana ny Fanatanjahantena, Rosa Rakotozafy, solotenan'ny Minisitry ny Tanora sy ny Fanatanjahantena, TINOKA Roberto, sady nametraka ny mba hanajana ny lamina rehetra noho hamehana ara-pahasalamana.
Noho izany indrindra dia tsy nahazo nifanerasera tamin'ireo mpankafy tonga nitsena azy ireo teny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato ny delegasiona fa avy hatrany dia namonjy ny fiara nitondra azy ireo nihazo ny Kianja Makis Andohatapenaka izay toerana hanaovana ny fihibohana.
mercredi, 14 juillet 2021 10:58
Fandriampahalemana : Voarara sy mahavoasazy ny fivarotana sy fisalorana fanamiana miaramila na ny mitovy endrika aminy ankalamanjana
Manao fampatsiahivana ny avy eo anivon’ny Zandarimariam-pirenena fa voarara sy mahavoasazy ny fivarotana na/sy fisalorana ny fanamiana mpitandro filaminana, na akanjo misahala endrika sy loko aminy, izay tsy nahazoana alalana, araka ny andininy faha 259-ny fehezan-dalàna famaizana (Code pénal).
Mahavoasazy 1 volana ka hatramin'ny 5 taona an-tranomaizina, miampy lamandy 300 000 ka hatramin'ny 9 000000 Ariary.
Toa izany ihany koa ireny mariboninahim-pirenena ireny. Mahavoasazy miampy lamandy 360 000 ka hatramin’ny 10 800 000 Ariary.
Raha manana dia anaovana ao an-trano na an-tokontany mihidy ihany fa tsy azo entina mivoaka ampahibemaso.
mercredi, 14 juillet 2021 10:57
Antananarivo Renivohitra : Nisesy ny haintrano
Toerana telo no nitrangana haintrano raha ny andron’ny talata 13 jolay, teto Antananarivo Renivohitra. Soamandrakizay, Ambaninampamarinana ary teny andrefan’i Befelatanana.
Namoizana ain’olona iray teny amin’ity farany. Fitaovana maro no levon’ny afo tao anatin’ireo tranga ireo.
Mila mitandrina sy manara-maso ny fitaovana ao an-trano, indrindra ny mpampiasa herinaratra manoloana ny fahatapahan-jiro matetika.
Mila hamarinina tsara ihany koa ny fiara mialoha ny hialana ao anatiny na maty aza ny motera hisorohana ny fahamaizana.